PPN : Marin-toerana ny vidiny -
AccueilSongandinaPPN : Marin-toerana ny vidiny
Azo ambara ho marin-toerana amin’ny ankapobeny ny vidin’ny PPN amin’izao fotoana, raha ny vidin-javatra teny Anosibe omaly no asian-teny. 2 300 Ar ohatra ny iray kilao amin’ny siramamy raha 2 600 Ar izany nandritra ny fitondrana Tetezamita (taona 2010).
Ny vary no tena nahitana fihenam-bidy tato anatin’ny volana vitsivitsy izao vokatry ny ezaky ny fitondram-panjakana, indrindra ny fiaraha-miasa matotra amin’ireo mpandraharaha matihanina eo amin’ny sehatry ny vary. Manodidina ny 1 320 Ar na 6 600 fmg no vidin’ny iray kilao amin’ny vary eny an-tsenan’Anosibe omaly. Sambany teo amin’ny tantara izany vidim-bary midina ao anatin’ny vanim-potoana maitso ahitra izany nampian’ny fitontongan’ny ariary.
Nataon’ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny fitsinjovana ny andavan’androm-bahoaka ka ny goavana indrindra tamin’izany dia ny fampidinana ny vidim-bary sy ny PPN amin’ny ankapobeny. Mazava ho azy fa tsy afa-misaraka amin’ny fitoniana ara-politika izao fahamarinan-toeran’ny vidin’entana fampiasana andavan’andro izao. Mila izany fitoniana izany rahateo ireo mpandraharaha matihanina amin’ny fanatanterahan’izy ireo ny asany ary mitaky fifampitokisana eo amin’ny roa tonta, dia ny fanjakana sy ny mpandraharaha.
Ho toa ny rano nararaka andamosin-gisa avokoa anefa izany ezaka izany raha mitohy izao fanakorontanana ataon’ny MAPAR sy ny TIM izao. Isan’ny nianteheran’izy ireo hanonganana izao fitondrana izao tokoa mantsy io resaka vidim-bary io ary efa nanaovan’ireo hainoamanjery mpomba ny fanoherana fandaharana manokana isan’andro mihitsy izany tany amin’ny Septambra 2017 tany. tampina ny daomy ankehitriny, marin-toerana, ary tsy nitsahatra nidina ny vidin’ny vary nafarana avy any ivelany, noho ny fiaraha-miasa matotra teo amin’ny fitondram-panjakana ary ireo mpandraharaha matihanina.